Wasiirka Xanaanada Xoolaha iyo Beeraha ee Maamulka Puntland ayaa gaadhay Magaalada Dhahar ee Gobolka Sanaag | maakhir.com
Dhahar: Wasiirka Xanaanada Xoolaha Beeraha iyo Deegaanka ee Maamulka Goboleedka Puntland Cali Jaamac Faarax (Cali Buureed) ayaa mudo laba cisho ah ku sugnaa Magaalada Dhahar ee Xarunta Gobolka Booxaaro halkaasi oo la sheegay inuu wada hadal joogta ah kula leeyahay wax garadka Deegaanka Dhahar, waxa la sheegay inay Buureed iyo dadka Deegaankaasi ka wada hadleen adkaynta Nabad gelyada.
Wasiirka Xaanada Xoolaha ee Puntland Cali Jaamac Faarax Buureed ayaa waxa la sheegay inuu aad dadka Deegaanka ugu baraarujiyay inay ka hor tagaan wax alaale wixii Amaanka Deegaanka Maja xaabinaya, Cali Buureed ayaa shaaciyay inay Jiraan kuwa doonaya inay Amaanka Mandaqada Sanaag wax yeeleeyaan balse loo baahan yahay inay dadka Deegaanku arinkaasi garwsanaadaan.
Cali Buureed ayaa sidoo kale sheegay in xaalada Gobolka oo idil ay haatan tahay mid Degan oo aanay jirin wax dhiila Colaadeed ah oo haatan taagan marka laga reebo tii dhawaan ka dhacaday Magaalada Badhan ee xarunta Gobolka Booxaaro, isaga oo taasina ku til maamay mid laga soo Abaabulay Magaalada Hargaysa oo la doonayay in dadka Deegaankaasi Amaankooda wax la yeelo balse ay ka guulaysteen dadka Deegaanku oo ay iska caabiyeen kuwii falkaasi maleegayay.
Cali Buureed ayaa horay ugu sugnaa Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari isaga oo markiiba Safar deg deg ah ugu booqlay Magaalada Dhahar oo uu deegaan ahaan ka soo jeedo, taasi ayaa timi ka dib markii la sheegay inay Amaanka Gobolka ay Qas ku wadaan Kooxo laga soo maleegay Magaalada Hargaysa.
Guud ahaan xaalada Gobolka Sanaag ayaa ah mid Degan oo aan saasi looga soo qalinayn, iyada oo ay dhawaan qorshihii ay ka wateen Badhan ku guul daraysteen Kooxo Laaluush ka soo qaatay Maamulka Hargaysa kuwaasi oo doonayay inay Barakac iyo dagaal hore ka dhaliyaan Gobolka Sanaag oo inta badan lagu tiriyo inuu safka hore kaga jiro Gobolka Degan marka la eego xaalada Dalka Somaliya uu maanta maryo.
« Puntland oo ka hashay Kooxo Budhcad ah oo Jidgooyooyin ah
Wakiilka Gaarka ee Q.M u qaabilsan arimaha Somaliya ayaa Gaadhidoona Magaalada Baydhabo »